Okunye ukungaqondi kahle ngenqubo ye-MBR ③
Isikhathi: 2020-07-19 Hits: 114
Ukungaqondi kahle kwe-3: Inqubo ye-MBR ayidingi ukukhishwa kwe-sludge
Ukuhumusha okulungile: Ngenxa yomphumela omuhle kakhulu wokugcina wokuhlunga ulwelwesi, udaka olucushiwe enqubeni ye-MBR lungafinyelela ekugxilisweni okuphezulu, futhi ukwahlukaniswa kwesikhathi sokugcinwa kwe-hydraulic kanye neminyaka yobudaka kungatholakala ngaphandle kokubheka umphumela wokuhlushwa kwendle kumanzi angcolile.
Kodwa-ke, le nzuzo ithuthukisa kuphela indawo yokudlala yamakhemikhali, ayithinti ukungcola futhi ayinakusetshenziswa njengesizathu sokusekela ukukhishwa kwendle. Inkinga yokukhishwa kwendle isadinga ukubuyiselwa ku-sludge eyenziwe yasebenza.
Uma udaka lungakhiswanga, udaka olucushiwe luyoba nezinkinga zokuguga, okuzothinta ukusebenza kwamakhemikhali futhi kuthinte ne-aeration.
Ngakho-ke, inqubo ye-MBR kuphrojekthi inganciphisa udaka, kepha nodaka nalo luyadingeka.
Okwedlule: Okunye ukungaqondi kahle ngenqubo ye-MBR ④
Okulandelayo: Okunye ukungaqondi kahle ngenqubo ye-MBR ②